तपाइँलाई थाहा छैन मार्केटिंग के हो | Martech Zone
आइतबार, जुलाई 27, 2008 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
के तपाईंले शब्दमा धेरै चिन्तन गर्नुभयो मार्केटिङ? धेरै शब्दहरूको साथ, परिभाषा विकृत र समय संग परिभाषित गरीएको छ। विकिपेडियाले निम्न परिभाषा प्रदान गर्दछ:
मार्केटिंग भनेको योजना र मार्केटिंग मिक्सको कार्यान्वयनको एक चलिरहेको प्रक्रिया हो (उत्पाद, मूल्य, स्थान, पदोन्नति अक्सर4PS को रूप मा संदर्भित) उत्पादनहरू, सेवाहरू वा व्यक्ति र संगठनहरू बीच विनिमय सिर्जना गर्न विचारहरूको लागि। विकिपीडिया
व्यक्तिगत ध्वनि, हह? मार्केटिंग परिवर्तन भयो किनकि बजार बदलियो बजारहरू बढ्दै र टाढाबाट उपभोक्ताहरूसँग जडित हुँदा, बजारहरूले कसरी उनीहरूको उत्पादन बेच्थे परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो।
क्याटलग र अखबारको विज्ञापन प्रयोग गर्दै ... र टेलिभिजन विज्ञापनहरूमा स्नातक गर्दै बजार in बजारआईएनजी हरायो।
कागजात खोजी हामी के गर्दैछौं भनिन्छ हेड मार्केटिंगमा Ax आफ्नो उपयुक्त लिखित अध्यायमा, बजारहरू क्ल्युट्रेन घोषणा पत्रमा कुराकानीहरू हुन्.
नयाँ बजारको समस्या यो थियो कि यो केवल एकतर्फी थियो, "संगठनबाट व्यक्तिगत"। हामीले बजार वास्तवमा के हो भनेर बिर्स्यौं।
बजार मानिस हुन्, बजार मध्यम होइन। मार्केटिंग भनेको मानिसहरूसँग कुराकानी गर्ने तपाईंको क्षमता हो, तपाईं तिनीहरूसँग कुराकानी गर्न कुन माध्यम प्रयोग गर्नुहुन्छ। मार्केटरहरू पनि व्यक्ति हुन्, र मार्केटसँग कुराकानी गर्न उनीहरूले गर्न सक्ने कुनै माध्यम वा विधि प्रयोग गर्नुपर्दछ।
माथिको फोटो धेरै राम्रो छ। कुनै साइनेज छैन, कुनै फ्लायरहरू छैन, टीझरहरू पनि छैन ... एक भिन्न तम्बू र color पनि तपाइँको उत्पादन छुट्याउनको लागि। केवल व्यक्तिहरू। मानिसहरु एक अर्कालाई बोल्दैछन्। मानिसहरू हातमा उत्पादन लिएर हिंडिरहेका छन्। मानिस ब्यापारसँग कुरा गर्दै। यसमा कुनै आश्चर्य छैन किन किसानहरू बजारहरू हरेक शहरमा बढ्दै छन्! तपाईका ग्राहकहरु तपाईको उत्पादन वा सेवा चाहान्छन्, उनीहरु थकित छन् कसैलाई पनि कुरा गर्न सक्षम नहुने गरी। १०० वर्ष पहिले भन्दा धेरै फरक छैन, हो त?
सत्य यो हो कि तपाइँले के मार्केटिंग बिर्सनुभयो is. मार्केटिंग4freakin P को होइन अरु केहि। मार्केटिंग बजारमा भाग लिइरहेको छ। मार्केटिंगले वेबसाइट राखिरहेको छैन, केहि प्रेस विज्ञप्तिहरू पठाउँदै, ह्वाइटपेपर पेस गर्दै र न्यूजलेटर पठाउँदै। मार्केटिंग तपाइँको ग्राहकहरु, वा परिप्रेक्ष्य ग्राहकहरु संग भेट गर्दैछ, र उनीहरुसंग इमान्दारी र इमान्दारीको साथ कुराकानी गर्दैछ।
यदि तपाइँ संचार गर्दै हुनुहुन्न (यदि केवल कुरा मात्र गरिरहेको छैन, त्यो सुन्न र प्रतिक्रिया दिँदै), तपाईं मार्केटिंग गर्नुहुन्न। यदि तपाईं ब्लगहरू, सामाजिक नेटवर्कहरू, मोबाइल (संचार), भिडियो (संचार) र ईमेल (संचार) जस्तै तपाईंको सामाजिक मिडिया अँगालेको छैन भने। प्राथमिक माध्यमहरू, तपाईं मार्केटिंग हुनुहुन्न।
मेरो ब्ल्ग बजारसँग कुराकानी गर्ने तपाईंको क्षमता सुधार गर्न टेक्नोलोजीको लाभ उठाउने बारे हो। यसैले मसँग विषय र लिंकहरूको यतिको विस्तृत सर्राई छ - तपाइँलाई सहयोग गर्न नयाँ टेक्नोलोजीको तरंग छ। पछाडि बस्नुहोस् र शब्दको बारेमा सोच्नुहोस् मार्केटिङ र यो कसरी व्युत्पन्न गरियो, यो के भयो भनेर होइन।
सैन राफेल वेबसाइटबाट आधुनिक फोटो। 1908 बाट मार्केट फोटो १०० वर्ष पुरानो फोटो ब्लग.
टैग: विश्लेषणब्रान्ड अडिटिंगWordPress
कसैले लक गर्नुहोस् Wingdings Up…
जुलाई १,, २०१ at १::27२ अपराह्न
तपाईले यो डगलस लेख्नु भएकोमा म खुसी छु! म मार्केटि inमा काम गर्दछु तर आफैंमा धेरै भन्दा धेरै असमानताका साथ फेला पारिरहेको छु जुन तरिका यसको नजिक आउँदैछ र मलाई जस्तो लाग्छ यो हुनु पर्छ।
मलाई सामाजिक मिडिया मनपर्ने कारण यो हो कि यसले हामीलाई हाम्रो सामाजिक आवश्यकतामा जडान गर्दछ र पुन: जडान गर्दछ।
विपणन (p पी को दृश्य) अब उप्रान्त काम गर्दैन। व्यक्तिहरू अब भन्न र निष्क्रिय गर्न इच्छुक छैनन्, हामी यस तरिकाले बाँच्नको लागि कहिल्यै थिएन - हामी सामाजिक जनावरहरू हौं!
केहि तर्क गर्न सक्छन् कि डिजिटल ढाँचा व्यक्तिगत छैन र 'वास्तविक-विश्व' सहभागिता आमन्त्रित छैन तर म विश्वास गर्छु कि यसको विपरित सत्य छ।
अधिक तपाईं सिक्नुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्, डिजिटल संसारमा भाग लिनुहोस्, तपाईंको इच्छा 'वास्तविक व्यक्तिहरूसँग त्यसो गर्ने तीव्रता।
यसको लागि धन्यबाद।
जुलाई १,, २०१ at १::28२ अपराह्न
धन्यवाद लिन! म प्रतिक्रियालाई कदर गर्छु र प्रशंसाका लागि धन्यबाद। यो समय हो कि मानिसहरु वास्तव मा आफ्नो उत्पादनहरु र सेवाहरु मा विश्वास गर्न थाले - तब यो बेच्न को लागी सजिलो छ र तपाईलाई बढाइचढाइ को आवश्यकता छैन।
तपाईंसँग अधिक डगसँग सहमत हुन सकेन।
कतै यस मार्गमा, मार्केटिंग 'बिग एम' बाट 'लिटल एम' मा मानिसका दिमागमा गए। यो वास्तवमै स्पिनमा जोडको साथ प्रोमोशनल पक्ष मात्र हो। हामी अझै यो आज पनि राजनीतिक परिदृश्यमा देख्छौं जहाँ काम भनेको उम्मेदवारहरूलाई "सन्देशमा" राख्नु हो। यी सबैले विपणनकर्ताहरूको एक पुस्तामा नेतृत्व गरेको छ जस्तो देखिन्छ जुन भित्र-बाहिर सोच्दछन् र संचारको अव्यवस्थाको माध्यमबाट मात्र आफ्नो सृजनात्मकताको स्तरमा केन्द्रित गर्दछन्। यसले व्यावसायिक मोर्चाका नेताहरूसँग केही ठूलो निराशा निम्त्यायो जुन हामीले यस मोर्चामा हाम्रो पुस्तकको लागि अन्तर्वार्ता लिएका थियौ ... तिनीहरू मार्केटिंगलाई केवल भाग्ने लागत केन्द्रको रूपमा हेर्छन् जुन व्यवसायलाई धेरै योगदान दिँदैन र नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।
तपाईं समस्या यहाँ सीधा हिट गर्दै हुनुहुन्छ। मार्केटिंगको यो परिभाषा मैले अनुशासनमा हुनुपर्ने हो भनेर कहिले पनि भनेको थिएन। यो संक्षेप मा, काम अधिक बनाउने भन्दा अधिक आधारभूत र महत्त्वपूर्ण छ ... यो 'खरीददारहरूलाई सबैभन्दा मूल्यवान् गर्न वास्तविक र गहन सम्बन्ध निर्माण' को काम हो। यो उनीहरूको आवश्यकता र प्राथमिकताहरू पूर्ण रूपमा बुझ्नको साथ सुरू हुन्छ ताकि तपाईको कम्पनीले वास्तवमा निर्माण गर्न चाहेका उत्पादनहरू उत्पादन गरिरहेका छन् मान्छेले किन्न चाहान्छन् र त्यसपछि किन कुराकानी गर्ने प्रामाणिक तरिकाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ किन ग्राहकहरू इच्छुक हुन सक्छन्। 'मेरो उत्पादन किन्नुहोस्' चिच्याउनु बेकार छ (कुनै पनि सुन्न नसक्ने गरीरहेको छ)… सोशल मिडिया र प्रकाशन सामग्रीका अन्य फारामहरू जडान स्थापना गर्न प्रयोग गर्नु अझ बढी प्रभावकारी छ।
म समुदायहरूको संख्याबाट मोहित छु जुन यी प्रकारका चीजहरूको वरिपरि स्वतन्त्र रूपमा विकास गर्दैछ ... समय र स्थानहरूमा जुन हामीले विपणन सन्दर्भमा पहिले सोचेका थिएनौं। यहाँ तपाईको विचार र तपाईको कामको लागि धन्यबाद।
यस्तो लाग्दछ कि हामी समयको पछाडि हिंड्छौं, हैन र? अन्तत: त्यहाँ मानिसहरु लाई स्पिन फैलाउने प्रतिक्रियाहरु छन्!
इनपुट को लागी धन्यवाद!